For your health and longer life, come to City Hospital Mandalay
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်က မြို့တော်ကိုခို
Patient Assistance Hotline: +959 977917519
Patient Relationship Center
Health Care Club Member
Home Facilities & Services Departments & Specialities Imaging Departments
Asahigh standard hospital, our Interventional Imaging Center provide accurate diagnostic facilities from the following departments
အဆင့်မြင့်မြို့တော်ဆေးရုံတွင် လူနာများ၏ ရောဂါ ရှာဖွေ စမ်းသပ် စစ်ဆေးရာတွင်အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့်
(DIAGNOSTIC & INTERVENTIONAL IMAGING CENTRE) ပုံရိပ်ဖော်ရောဂါ ရှာဖွေစမ်းသပ်ဌာနကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
၁။ တီဗီဓါတ်မှန်ဌာန (Ultrasonography Department)
၂။ ဓါတ်မှန်ဌာန (X-Ray Department)
၃။ ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်ဌာန (CT Department) တို့ပါရှိပါသည်။
၄။ သံလိုက်လှိုင်းဓါတ်မှန်ဌာန (MRI Department) တို့ပါရှိပါသည်။
၁။ တီဗီဓါတ်မှန်ဌာန(Ultrasonography Department)
This is an imaging technique that sends high frequency sounds (‘ultrasound’) to parts of body tissue and recording the echo sounds to allow visualization (sonogram) of the internal organs.
This is employed in looking after and diagnosing conditions in Gastroenterology, Obstetrics & Gynecology (especially in medical check-ups for expecting mothers), Cardiovascular systems and so on according to the referral of the medical consultants.
.တီဗီဓါတ်မှန်ဌာန (Ultrasound) ရိုက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ
ပြန်လည်ရိုက်ခတ်သော ပဲ့တင်သံကိုစက်ဖြင့် ဖမ်းယူ၍
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကလီစာအစိတ်အပိုင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ၊
သန္ဓေ္ဓသားနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊
စစ်ဆေးခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းများကို
သင်ရွေးချယ်ပြသသော ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်
It operates by sending X-rays (a form of high frequency electromagnetic radiation) to the necessary body area such as in musculoskeletal (bones, muscles and joints) and pulmonary (lung) systems
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ X-ray ဓါတ်ရောင် ခြည်ကို အသုံးပြု၍ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရောဂါများအား ဖလင်ပြားပေါ်တွင်
၃။ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ဌာန(CT Department)
Computerized Tomography, is similar to X-ray radiography in that it uses radiating waves to create images of the internal organs. CT, however, offersathree dimensional visualization of the internal organs in further detail by taking multiple images at different angles/directions (transverse, longitudinal and oblique). Vascular systems, bones, muscles and brain structures can be seen using the CT.
ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်(C.T)ဆိုသည်မှာ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို
အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာအကူအညီဖြင့် လူခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ
ရောဂါများအား ပုံရိပ်ဖော်၍ ရောဂါရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူနာအား ကုတင်ပေါ်တွင်ပက်လက်အိပ်စေပြီး ၊ မိမိ ရိုက်လိုသော ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းပေါ်သို့ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည် ပို့လွှတ်ကာ ကွန်ပျူတာ မှတဆင့် ပုံရိပ်ဖော်ဖြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြက်သွန်ကွင်းလှီးသကဲ့သို့(ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက်၊ ကန့်လန့်ဖြတ် အပိုင်းလိုက်ပိုင်း၍) အတွင်းကလီစာများကို တလွှာခြင်းလွှာကြည့်ခိုင်းပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရစေပါသည်။
သွေးကြောများ၊ အရိုးများ၊ ကြွက်သားများ၊ ဦးနှောက်အပိုင်းများကိုလည်း ပကတိအတိုင်း မြင်ရသကဲ့သို့ သုံးဖက်မြင်(3D) ရုပ်လုံးကြွပြုလုပ်ပြီး ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
၄။ သံလိုက်လှိုင်းဓါတ်မှန်ဌာန (MRI Department)
The MRI machine looks likealarge tube that is open on both ends with an examination table that moves along this tube. Magnetic Resonance Imaging (MRI) isatype that scan that usesalarge, powerful magnet, radio waves and computing systems to provideahighly detailed 3D images of the various internal structures, such as blood vessels, soft tissues, bones, heart, kidneys and other organs. It is highly effective diagnostic procedures in determining the structure as well as the functioning of the organs, and MRI may be needed in instances where ultrasound, CT or X-rays are unable to provide adequate details of the area of interest.
Facilities Patient Guide Service Types
Health Screening & Packages Patients & Visitors Guide4Hours Service
Follow us: City Hospital Mandalay © Copyright 2018. City Hospital Mandalay.